Xildhibaan Dalxa: Waxaan ku soo laabanay Muqdisho kadib Nabadeyn aan ka wadnay KG – Kalfadhi
January 24, 2019 Kalfadhi
Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo Xildhibaano isugu jira Golaha Shacabka iyo Aqalka Sare ayaa shalay galab dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho, kadib markii ay 8 maalmood ay ku sugnaayeen magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel-gaarka ah ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Wafdiga Guddoomiyaha ayaa sidoo kale waxaa ka mid ahaa Guddoomiye ku xigeenka 1aad ee Golaha Shacabka Cabdi-wali Sheekh Ibraahim Muudey.
Guddoomiye Maxamed Mursa iyo wafdigiisa ayaa mudadii ay halkaasi ku sugnaayeen waxay kulamo la soo qaatay qeybaha Bulshada Koonfur Galbeed iyo masuuliyiinta Maamulka. Sidoo kale waxay gogal nabadeed ay ka fureen magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ah Wafdigaas ayaa Kalfadhi u sheegay iney shalay galab ku soo laabteen magaalada Muqdisho guulna uu ku soo dhamaaday socdaalkoodii Baydhabo.
“Waxaan si nabad ah ugu soo laabanay Muqdisho, kadib maalmo aan ku soo qaadanay KGS, mudadii aan halkaas joognay waxyaabo badan ayaa ku soo guuleysanay”, ayuu yiri Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo katirsan Baarlamaanka Soomaaliya. ” Waxaan la soo kulanay qeybaha Bulshada iyo maamulka waxaana soo dhageysanay cabashadooda, qaarkood isla goobta ayaa ku xalinay qaar kalane xalkooda ayaa socda”, ayuu Kalfadhi u sheegay Xildhibaan Dalxa.
Maxamed Cumar Dalxa ayaa Kalfadhi u sheegay in Guddoomiyaha Golaha Shacabka uu qaabilay cabashooyin badan oo ka dhashay doorashadii magaalada Baydhabo ka dhacday bishii hore, Cabashada ayuu sheegay iney ka imaaneysay odayaasha iyo siyaasiinta qaarkood laguna guuleestay in la xaliyay doodihii taagnaa.
“Odayaasha aan qaabilnay waxay ka cabanayeen qaabkii ay u dhacday doorashada, iyo xeragga Sheekh Mukhtaar Roobow oo dowladda xirtay, iyo caburin”, ayuu Kalfadhi u sheegay Xildhibaan Dalxa “Arinta Sheekha waxaa ku jira Madaxweyne Lafta-gareen iyo Guddoomiyaha Golaha Shacabka, balse inta kale cabashadii ay qabeen waa la xaliyay”, ayuu hadalkiisa sii raaciyay Xildhibaan Dalxa.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Guddoomiyaha Golaha Shacabka ayaa Gogal Nabadeed ka furay Koonfur Galbeed si loo xaliyo tabashooyinkii jiray waxa uuna Xildhibaan Dalxa sheegay in lagu guuleestay mira dhalka gogashaasi. Guddoomiyaha Golaha ayaa sidoo kale ka qeyb qaatay talooyinka loo jeedinayo Madaxweyne Lafta-gareen oo qorsheynaya dhismaha Golahiisa Wasiirada.
“Guddoomiyaha iyo Xildhibaanada la socday waxay ka soo tala dhiibteen wasiirada cusub ee dhawaan la magacaabi doono”, ayuu yiri Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa. “Arinta Abuu-mansuur dhawaan waa soo dhamaan doontaa, waxaana ku jira Guddoomiye Maxamed Mursal mana ka hordhacaayo”, ayuu hadalkiisa ku soo gaba-gabeeyay hadalkiisa Maxamed Cumar Dalxa.
Muddo 8 maalmood ayuu Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ku sugnaa Koonfur Galbeed Soomaaliya, waxa uuna katirsanaa madaxdii ka qeyb gashay Munaasbadda caleema-saarka ee Madaxweynaha Koofur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed oo dhacday todobaadbkii hore. Guddoomiyaha ayaa mudadii uu halkaasi ku sugnaa waxaa la sheegay in la xaliyay dhamaan cabashooyinkii ay qabeen dadka Koonfur Galbeed marka laga reebo xiragga Sheekh Mukhtaar Roobow Cali Abuu-mansuur.
Madaxweynaha Hirshabeelle oo maanta furaya Kalfadhiga 5-aad ee Baarlamaanka